March 7, 2021 Xuseen 5
Puntlandtimes (Muqdisho)-Habeenimadii Jumcada waxaa lagu kala tegey shir ay la haayeen Ra’iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaalliya iyo xubnaha midowga mushairixiintan mucaaradka ah ee Madaxweynaha Soomaaliya.
Si lamid ah waxaa shalay oo Sabti ahayd baaqday mudaharaadyo ay qaban qaabinayeen mucaaradku oo looga soo horjeedey madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qayb ka ahaa heshiisyadii hore ee Rooble iyo mucaaradka.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in saraakiisha hay’adda NISA oo kulan xasaasi ah yeeshay ay go’aamiyeen in laga hortago waxkasta oo lagu wiiqayo awoodda madaxweyne Farmaajo lalana socdo dhqdhaqaaqyada mucaaradka.
Dowladda oo diidan mudaharaadka mucaaradka ayaa musharixiinta ku hanjebisey in ciidankooda ilaalada gaarka ah ay uga yimaadaan goobo cayiman isla markaaana ay shacbaka soo raacaan taasi oo aan u cuntamin rag badan oo aan ku kalsoonayn ciidanka dowladda.
Saraakiil katirsan ciidanka ammaanka dowladda Soomaaliya oo warbaahinta xog hoose siiyey ayaa waxa ay sheegeen in uu socdo Qorshe lagu soo xirayo Saraakiisha horkaceysa Mucaaradka dhinaca ciidanka.
Nimankaas taageero xoog leh kuma haystaan Muqdisho iyo dalkoo idil Farmaajo ha la diidanaadoba e.
Askariga Ku haybta ah ayay $100 doollar ka musuqi jireen,maantana si joogto ah ayuu u helaa iyadoo loo kordhiyay,halka dhaqankii,culimadii,siyaasiyuuntii caanka ahaa dhinaca xukuumadda mareen ka gadaal markii kiiba $ 5000 loo qoray bill kasta
Askarigay boqolka doollar ka musuqi jireen maanta waakan rasaasta Ku furaya,mana rabo inay soo laabtaan,waayo wuu baqtin,dan uma hayaan.
Farmaajo kursiga ha Ku dhego,laakiin qof kasta oo soomaali ahi wuu ogyahay inu wax qabtay,wax badan qaban karo haddii kursiga loo daayo amaba mar kale lasoo doorto.
Soomaalidu hayska daayaan Farmaajo 20 sano,waayo maanta doorasho dalku uma baahna,wuxu u baahan yahay nin samato bixiya,fursadna la siiyo,Farmaajaana ugu dhow.
HIRSI FARMAAJO MAXUU QABTAY?
1. ARDEYDA PUNTLAND SHAHADO U DIDAY.
2. MAREXANKI GEDO AYUU QAXIYAY.
3. KURSIGA IYO KISMAYO JECLAADAY.
4. CIDAN AYU DHISTAY U WAX KU DILO
@hirsi Farmajo $5000 dolar muu askariga bil walba siyaa kkkkk iska sax beenta waxay u egtahay hadalkada inuu been yahay waxad qoreyso iska fiiri intadan dhameyn dee
@ WIIL WAAMO AKA CARUURTII INA ILEY, SEE CAMAL AHMED MADOOBE GAAL IYO MUSLINBA NAC. MD DENI BAA UGU DAMBEEYEY WAX TAAGEERA ASAGIINA WUU LA DAGEY SIDUU ULA DAGEY JUBALAND. MARKA UMA MALEYNAAYO IN CID TALO SOOMAALIYA KAA WAYDIINAYSO. QASAARO
Lama diidana in farmaajio soo noqdo, laakiin haduusanba doorasho rabin uu ka door biday,in uu xoog ku haysto, maleeshiya difaacdana samaeystey. hadda ka hor buu yiri, Cumar geelle 40 sanadood buu haystaa wadankiisiina wuu dhisay, anigu kama maqal,waa sida la yir.